DAAWO: Ajandayaasha kal-fadhiga barlamaanka PL & qodobadii Dhoobo-daareed lagu ridey oo kujira.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo khudbad ka jeedinayey xafladda daahfurka kal-fadhiga 47aad ee barlamaanka Puntland ayaa ka hadlay qodobada ugu muhiimsan ee ajandayaasha kal-fadhiga.
Jibriil, wuxuu sheegay in arrimaha ugu waaweyn ee horyaal barlamaanka ay kamid yihiin xaaladda guud ee Puntland ay ku sugan tahay xilligaan, waxqabadkii barlamaanka xeerar ay xukuumaddu u soo gudbisey.
La xisaabtanka uu hoggaamiyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayuu sheegay inuu noqon doono mid kamid ah ajandayaasha horyaal barlamaanka Puntland mudada lagu jiro kal-fadhigooda 47aad.
Dhanka kalena, guddoomiyaha barlamaanka Puntland waxa uu sheegay in barlamaanka Puntland uu ka qayb qaadan doono arrimaha doorashada barlamaanka heer federal gaar ahaan doorashada xildhibaanada aqalka sare.